शेखरको विरासतमाथि लालबाबुको चुनौती – Your1click
मोरङ–६ का २३१ मतदातासँगको कुराकानीपछिको विश्लेषण
टंकी सिनुवारी मोरङका भरत र जनार्दन रेग्मी दाजुभाइ हुन्। एकैठाउँमा बस्ने उनीहरुका धेरै कुरा मिल्छन्, २१ गतेको चुनावमा कसलाई भोट हाल्नेबारे भने रेग्मी दाजुभाइ दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन्।
भरतलाई लाग्छ, यो क्षेत्रबाट यसपालि एमाले उम्मेदवार लालबाबु पण्डितले चुनाव जित्छन्। ‘लालबाबु पण्डितलाई भोट दिन्छु, यसपटक उनैले जित्छन्,’ उनले भने।
सँगै रहेका जनार्दनले दाइको कुरा पत्याएनन्। ‘यो त पहिल्यैदेखि कांग्रेसकोे गढ हो। त्यसमाथि शेखर कोइराला छन्। उनका अगाडि गच्छदार (विजयकुमार) को त केही लागेन भने लालबाबु?’ उनले भने।
भाइको कुरा भुइँमा खस्न नपाउँदै भरतले हिसाब सुनाए, ‘यसपटक लालबाबुले चार हजार मतको अन्तरले जित्छन्।’
जनार्दनले उनको हिसाब पनि पत्याएनन्, ‘प्रतिस्पर्धा छ तर बाजी शेखरले नै मार्छन्। धेरै मतको अन्तर भने हुन्न होला।’
रेग्मी दाजुभाइलाई अरु बेला राजनीतिको खासै चासो हुन्न। चुनावको बेला भने विराटनगरमा त्यसै माहोल तातिने उनीहरुको अनुभव छ।
राणाविरोधी र प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको केन्द्र विराटनगरमा निर्वाचनको बेलामा चर्चा र गरमागरम नहुने कुरै भएन।
कोइराला परिवारको लामो इतिहास रहेको विराटनगरमा यसपालि सो परिवारको विरासत जोगाउन शेखर कोइराला मोरङ–६बाट उम्मेदवार छन्।
उनको परिवारका तीन जना मुलुकको प्रधानमन्त्री भैसकेका छन्—मात्रिका, वीपी र गिरिजाप्रसाद कोइराला।
विपिका भाइ र गिरिजाका दाजु केशव कोइरालाका छोरा हुन्, शेखर।
शेखरका लागि राजनीति नौलो विषय होइन। २०४८ सालमै काका गिरिजाप्रसादलाई मोरंङ –१ बाट जिताउन चुनावमा खटिएका कोइराला यसअघि नै मोरङ–६ बाट दुई पटक निर्वाचित भैसकेका छन्।
मोरङ–६ कांग्रेसको बलियो प्रभाव क्षेत्र हो। स्थानीय चुनावमा यो क्षेत्रमा पर्नेे धेरै वडा कांग्रेसले जितेको छ। यहाँ बलियो प्रभाव रहेको अर्को दल विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम मिसिएपछि त कांग्रेस झनै बलियो भएको छ।
यो क्षेत्रबाट गच्छदार २०६४ सालको संविधान सभामा विजयी भएका थिए। २०७० मा उनी शेखरसँग पराजित भए।
मोरङ– ६मा विराटनगर महानगरपालिकाक ४,५,६,७,११,१२ र १३ वडा पर्छन्। महानगरका ७ वटावडा मध्ये २ मा कांग्रेस, २ मा वडा एमाले र एउटामा माओवादी केन्द्र बिजयी भएको छ।
सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका २ देखि ७ सम्मका वडा यही क्षेत्रमा पर्छन्। यी ६ वडामध्ये ५ मा कांग्रेस र एउटामा एमालेले जितेको छ।
यो क्षेत्रमा बुढीगंगा गाँउपालिका पनि पर्छ। गाँउपालिकाका ३ वडामा कांग्रेससँग एकता गरिसकेको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले जितेको छ। एमालेले ३ वटा वडा र कांग्रेसले एउटा वडा जितेको छ।
स्थानीय चुनावमा वडाध्यक्षलाई आएको मतलाई मात्र आधार मान्ने हो भने शेखरअगाडि रहेका छन्। तर एमाले पनि कमजोर छैन।
राष्ट्रिय राजनीतिमा अलग व्यक्तित्व बनाएका लालबाबु पण्डितलाई एमालेले यो क्षेत्रमा उतारेपछि चुनावमा रौनक थपिएको छ। शेखरका लागि सजिलो मानिएको यो क्षेत्र अब प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ।
मालेको भूमिगत कालमै मोरङमा काम गरेका पण्डित यहाँका पुराना नेता हुन्। २०४८ सालमै उनी मोरङबाट सांसद चुनिएका थिए। त्यसैले लालबाबुले शेखरलाई कडा चुनौती दिने विश्वास एमालेको छ।
सेतोपाटी टिमले मोरङ –६ का गाँउ र नगरमा पर्ने सबै वडा पुगेर २०० भन्दा बढी मतदातासँग कुरा गर्दा यो क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा छ भन्ने प्रष्टै देखियो।
हामीले दुई दिनमा २ सय ३१ जना मतदातासँग कुरा गर्यौं।
तीमध्ये शेखर र लालबाबुलाई मत दिन्छु भन्ने मतदाताबीच झिनो अन्तर छ। २ सय ३१ मध्ये १ सय ८ जनाले शेखरलाई भोट दिन्छु भने। लालबाबुलाई मत दिन्छु भन्ने ९९ भेटिए। १६ जना मतदाताले मत दिने पार्टी भन्न चाहेनन् भने ८ जनाले अन्य पार्टीलाई मत दिने बताए।
शेखरको क्षेत्रमा आएर पनि लालबाबु प्रतिस्पर्धात्मक देखिनुको मूल कारण पछिल्लो चुनावमा कांग्रेसलाई मत दिएका कतिपय मतदाताले यसपालि पण्डितलाई रोज्नु हो। २३१ मध्ये हामीले २८ जना यस्ता मतदाता भेट्यौं जसले अघिल्लो पटक शेखरलाई भोट हालेका थिए तर यसपालि पण्डितलाई भोट दिने निर्णयमा पुगेका छन्। विगतमा एमालेलाई मत दिएका ३ जना मात्रै मतदाता भेटिए जसले यसपालि कांग्रेसलाई मत दिने बताए।
पछिल्लो संविधान सभामा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई भोट दिएका ९ जनाले यसपालि कांग्रेसलाई मत दिने बताए। जुन मतले कांग्रेसलाई सहज बनाउनेछ। फोरम लोकतान्त्रिकको मत पनि जोडिएकाले मात्र शेखरलाई यहाँ केही राहत भएको हो। नत्र उनको जित झनै चुनौतीपुर्ण हुने थियो।
स्थानीय चुनावमा यो क्षेत्रमा कमजोर देखिएको एमाले कसरी शेखरको बलियो प्रतिद्वन्द्वी बन्यो?
एमाले कार्यकर्ताहरु स्थानीय चुनावमा पार्टी कमजोर थियो भन्ने नै मान्न तयार छैनन्।
सुन्दरहरैचा –५ का जीवन दाहालले यो क्षेत्रका स्थानीय तहमा एमाले बलियो भए पनि आन्तरिक विवादले हारेको बताए। ‘यो क्षेत्रमा एमाले बलियो हो तर आन्तरिक विवादले हार्नु पर्यो। यो पटक त्यस्तो हुँदैन,’ उनले भने,‘अहिले त एमाले र माओवादी मिलेका छन् त्यो भोट पनि यतै आउँछ।’
कसले चढाउनेछ शिवधनुषमा ताँदो – निधि वा महतो?
बाबुराम-नारायणकाजीको क्षेत्रका २ सय मतदातासँग कुरा गर्दा…
कांग्रेस समर्थक भने यो क्षेत्रमा कांग्रेस विगतदेखि नै बलियो रहेकोले शेखरले सहजै जित्ने दाबी गर्छन्।
सुन्दरहरैचा–३ का लक्ष्मीप्रसाद नेपालले आफू वीपीकै पालामा कांग्रेस बनेकोले अन्यत्र हातै नजाने बताए। ‘यो क्षेत्रमा कांग्रेसको परम्परागत भोट छ। कांग्रेसबाहेक अरु पार्टीमा सोच्दैनन्,’ उनले भने, ‘शेखर कोइराला परिवारको पनि भएकोले उनले अझै बढी भोट ल्याउछन्।’
दुई पटक कांग्रेसलाई मत दिएका केहीलाई शेखरले काम गरेनन् भन्ने परेको छ। यही कुरा एमालेले जोडतोडले उठाएको छ। त्यसैले अघिल्लो पटक कांग्रेसलाई मत हालेका २८ जनाले यसपालि एमालेलाई मत दिने बताए।
त्यसबाहेक केही स्थानीय मतदाताको अर्को गुनासोलाई पनि एमालेले ‘क्यास’ गर्न खोजेको छ। बुढीगंगा गाँउपालिकाका केही वडा विराटनगरको शहरी क्षेत्रमा पर्छन्। यहाँका जनताले आफ्नो क्षेत्र विराटनगर महानगरमा पार्न चाहेका थिए तर स्थानीयको यो चाहानालाई शेखरले वास्ता नगरेको एमालेको आरोप छ।
शेखरको प्रशंसा गर्ने पनि प्रशस्त भेटिन्छन्। साउनमा बाढी आउँदा शेखरकै कारणले आफूले राहत पाएको सुन्दरहरैचा –४ की माया बास्तोलाले बताइन्।
‘बाढीले गर्दा घरमा बस्न सकिएको थिएन। हामीसँग खाने अन्न समेत थिएन’ उनले भनिन् ‘कांग्रेसकै मान्छेले आएर हाम्रो उद्धार गरेका थिए। त्यही भएर हामी कांग्रेसलाई भोट दिन्छौं।’
शेखरले राम्रो काम नगरे पनि गलत काम भने नगरेको भन्दै कांग्रेसका मतदाता उनको बचाउ गर्छन्। कतिपयले शेखर ठीक तर उनका कार्यकर्ता बेठीक भएको जिरह गरे।
कांग्रेस र शेखरसँग भन्दा पनि उनका कार्यकर्तासँग यहाँका मतदाता असन्तुष्ट रहेको बुढीगंगा–४ का शम्भुलाल सापकोटाले बताए।
‘म रिक्सा चलाएर खाने मान्छे। मलाई कसैको आश पनि छैन। तर पनि मेरो आस्था त कांग्रेसमै छ,’ सापकोटाले भने,‘यहाँ त शेखरका मान्छेले सबै बिगारेका छन्। उनीहरुले त हामीलाई मान्छे गन्दैनन्।’
यो क्षेत्रमा कांग्रेसका परमपरागत मतदाता नै शेखरको ठूलो तागत हो। कांग्रेस वा शेखरप्रति उनीहरुका गुनासा त छन्। तर पनि उनीहरु कांग्रेसलाई नै मत दिन्छन्।
‘काम त कसैले गर्दैन। दिन हुने खालको त कांग्रेस पनि होइन,’ विराटनगर बरगाछीका इन्द्रकुमार लाभले भने, ‘बिरालोलाई भात दिन्न भनेर नमिल्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ मुसो त्यसैले मार्छ। भोट त कांग्रेसलाई नै दिन्छु।’
लालबाबु पण्डितको इमान्दार छविले कतिपय कांग्रेस मतदातालाई भने तानेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा उनले गरेका कामको चर्चा विराटनगर पनि पुगेको छ।
‘उनी यो क्षेत्रका त होइनन्। यसअघि अन्तैबाट लडेका थिए,’ बुढीगंगा–१ का श्रीचन्द्र राईले भने, ‘तर लालबाबु इमान्दार र निष्कलंक मान्छे हो। उहाँ आएपछि यहाँको विकास हुन्छ भनेर कांग्रेस छोडर एमालेलाई भोट दिँदैछु।’
शेखर पहाडी समुदायका हुन भने लालबाबु मधेसी समुदायका हुन्। उम्मेदवारजस्तै मोरङ–६मा मतदाता पनि दुई फरक समुदायका छन्। यहाँका मतदातामा मधेसी र पहाडी समुदायको गहिरो समिश्रण छ।
शेखर र लालबाबुको एउटा समान विशेषता छ—उनीहरु दुबै अर्को समुदायमा सजिलै घुलेका छन् र उत्तिकै ग्राह्य पनि। शेखरलाई मोरङ–६ मा मधेसी मतदाताले जति रुचाउछन्, लालबाबुलाई पहाडी समुदायका मतदाताले पनि त्यतिनै रुचाउछन्।
यी दुईको यो विशेषताले पनि उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ। चुनावमा रौनक थपेको छ।
← जनतालाई दु:ख दिएर आफूले मात्र सुख भोग्ने भ्रष्ट नेताहरुलाई कुकुर नै लगाएर लखेट्न रविको अपिल ( हेर्नुस भिडियो )
चुनावमा मालाको प्रयोग,दैनिक पाँच करोडको फूल कारोवार →